National – Page2– Bharosa Media
काभ्रेमा भारी हिमपात
February 28, 2019	Leaveacomment 111 Views
काभ्रे । बनेपा लगाएत आसपासका क्षेत्रहरुमा बिहीबार विहान भारी हिमपात भएको छ । काभ्रे जिल्लाको बनेपा, धुलिखेल, ढुङखर्क, कुशादेवीको लगायतका क्षेत्रमा १२ बर्षपछि हिमपात भएको हो । ? काभ्रेको दक्षिणी भेगसँगै पश्चिमी उत्तरी भेगका गाँउहरुमा समेत बाक्लो हिमपात भएको छ । काभ्रेको उच्च भागहरुमा हिमपात भएको हो । यो बर्ष एक दशकमै उच्च हिमपात ढुंखर्कमा भएको छ । काभ्रेको मण्डनदेउपुरमा ...
काभ्रेको क्रसर मापदण्ड विपरित
February 27, 2019	Leaveacomment 88 Views
काभ्रे । काभ्रे जिल्लाका प्रायः क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालित भईरहेको जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिद्वारा गठित प्राविधिक उपसमितिले प्रतिवेदनमा जनाएको छ । काभ्रेका सबै स्थानका क्रसरहरूको अनुगमन पछि प्रतिवेदन उपसमितिले अनुगमन समिति समक्ष बुझाएको थियो । काभ्रेमा रहेका सबै क्रसरले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी भएको नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धी बनेको मापदण्डअनुसार नचलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको ...
विकासको प्रणालीलाई मजबुत बनाउन सरकार लागिपरेको छः मन्त्री बास्कोटा
February 27, 2019	Leaveacomment 98 Views
धुलिखेल । धुलिखेल नगरपालिकाको ३३औं स्थापना दिवस तथा साक्षर नगर घोषणा सभा सम्पन्न भएको छ । सभामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताउँदै विकासको प्रणालीलाई सदृढ, मजबुत बनाउन सरकार लागिपरेको बताएका छन् । बाँस्कोटाले नेपाली तथा अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्धहरुसँग मिलेर नेपालको समग्र विकास निर्माणका लागि अगाडि बढिरहेको र समावेशीताको आधारित लोकतन्त्र ...
February 27, 2019	Leaveacomment 72 Views
काठमाडौं । बुधबार ताप्लेजुङमा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सवार एयर डाइनेष्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ । पाथिभरा मन्दिर नजिकै ताप्लेजुङको फुङलिङस्थित सिस्ने खोला सिरान दारे भीरमा दुर्घटना भएका हो । हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्यटन मन्त्री अधिकारीसहित सात जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनास्थलमा ६ वटा शव जलेको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिरबाट फर्कने क्रममा उक्त हेलिकप्टर दुर्घटनामा ...
पाँचखालमा अरनिको राजमार्ग र वि.पी राजमार्ग सडक निर्माण
February 20, 2019	Leaveacomment 93 Views
काभ्रे । बुधबार काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका खर्केटारबाट नमोबुद्ध नगरपालिकाको बुच्चाकोट जोड्ने सडकको प्रदेश सांसद लक्ष्मण लम्सालले उद्घघाटन गरेका छन् । लम्सालले दुई वटा नगर जोड्ने सडक करिब ६ किलोमिटर लम्बाइको सडक निर्माणका लागि उनले संसद विकास कोषवाट ६५ लाख रुपैया विनियोजना गरी सडक निमार्णको कार्य अघि बढाएका छन् । अरनीको राजमार्ग र वि.पी राजमार्ग जोड्दा पाँचखाल बासी र नामोबुद्धका बासिन्दाहरुलाई ...
February 18, 2019	Leaveacomment 103 Views
काठमाडौं । बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चढ्ने गरेको ना १ झ १६३३ नम्बरको स्कार्पियो जीप सडकमा रोकी राखेको ट्याक्टरको टेलरसँग ठोक्किएको सशस्त्र प्रहरी बल बाराले जनाएको छ । बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराई चढेको गाडी दुर्घटना योजनाबद्ध भएको आशंका पीडित परिवारले गरेका छन् । १२ माघमा जितपुर सिमराको पसाहा पुल नजिक भएको सवारी दुर्घटनामा सशस्त्र प्रहरीका एसपी बलराम पोख्ररेलको ...
स्रोत तथा साधनको कमी, स्तरिय विशेषज्ञ डाक्टरको कमी हुँदा हामी सहर केन्द्रीत हुन बाध्य छौं
February 18, 2019	Leaveacomment 190 Views
जीवित थापा, प्रबन्ध निर्देशक बनेपा हेल्थ केयर, बनेपा, काभ्रे ० आज भोली के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ? मैले मेरो परिचयमा पनि भने, बनेपा हेल्थ केयरको सञ्चालक भनेर, त्यसैले यसैका सेवाहरु लाई अझै परिस्कृत तथा बिस्तार गर्नु मै व्यस्त छु अचेल । ० बनेपा हेल्थ केयरको बारेमा बताई दिनुहोस् न । काभ्रे जिल्लामै अत्यन्त शुलभ शुल्कमा गु्णस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रदायक ...
युट्युबबाट हटाइयो “लुट्न सके लुट कान्छा”
February 16, 2019	Leaveacomment 124 Views
राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीको मानमा आंच आउने शब्दको प्रयोग गरिएको गायक पशुपति शर्माको गीत ‘लुट्न सके लुट् कान्छा..’ सार्वजनिक भएको दोस्रो दिन युट्युब च्यानलबाट हटेको छ। गितमा सरकारी निकायका भ्रष्टाचारका कयौं घटनाहरुलाई समेटिएपनि केहि बिषयमा शब्दको चयन आपत्तिजनक भएकाले उक्त गित युट्युबबाट हटेको हो। आफैले लेखेको गित युट्युबबाट हटेपछि गायक पशुपति शर्मा यस विषयमा फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन् । आदरणीय श्रोता ...
February 16, 2019	Leaveacomment 136 Views
काठमाडौं । काठमाडौंको सुन्धारास्थित रहेको काठमाडौं मल अब कर्पाेरेट कार्यालयले सञ्चालन गर्ने भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं मल खाली गराएर कर्पोरेट हाउस बनाउन लागेको हो । काठमाडौं मलमा हाल सञ्चालनमा रहेका पसलहरु हटाइ कर्पोरेट कार्यालय राख्न भाडामा दिने कोषको योजना रहेको छ । व्यवसायी प्रवीण शमशेर राणाले शुरुवातदेखि नै १५ वर्षका मलको व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका थिए ...
चरेससहित दुई महिला पक्राउ
February 16, 2019	Leaveacomment 106 Views
वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा मुख्य भन्सार कार्यालय अगाडिबाट ९ किलो लागूऔषध चरेससहित २ भारतीय महिलालाई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नेपालबाट भारततर्फ जान लागेको भारत हरियाणा बस्ने वर्ष ३२ की निशा साह र वर्ष ३० की सोनाली साहको साथबाट ९ किलो लागूऔषध चरेस बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जानकारी दिए । सशस्त्र प्रहरीले निशासँग ४ किलो र सोनालीसँग ५ किलो लागूऔषध ...